admin – Page 51 – Bestnewsinfo
सार्बजनिक यातायात दुई दिन मा चल्ने
No Comments on सार्बजनिक यातायात दुई दिन मा चल्ने
चैत ११ देखिको बन्दाबन्दीले अति प्रभावित यातायात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेपछि व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सरकारले असार अन्तिम साता छोटो दूरीमा (जिल्लाभित्रै) यातायात सञ्चालन खुला गरे पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलगायतले सञ्चालन गरेका थिएनन् । आफूहरूको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको भन्दै महासङ्घले यातायात सञ्चालनको तयारी थालेको छ ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले दुई-तीन दिनको तयारीपछि यातायात सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी भोलि र पर्सि सरकारसँग छलफल गरेर सम्भवत ६ गतेबाट गाडी चलाउँछौँ । मौद्रिक नीति ठीक छ तर लामो दूरीको पनि खोल्नुपर्छ, जिल्लाभित्रको खुलेर मात्र हुँदैन । ”
सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात क्षेत्रको बैङ्क सावाँ र ब्याज छ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय थप गर्ने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्र्जाको व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाबाट अति प्रभावित पेसा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्ब रुपियाँको कोष सञ्चालनमा ल्याएर यातायात क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । जसले गर्दा यातायात सुचारु गर्न सहज भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
राम जन्मभूमि प्रसङ्ग :ठोरिको सीता गुफास्थित नेपाल भारत सिमाको ३६ नम्बर पिलर एकाएक ढालियो
No Comments on राम जन्मभूमि प्रसङ्ग :ठोरिको सीता गुफास्थित नेपाल भारत सिमाको ३६ नम्बर पिलर एकाएक ढालियो
पर्साको ठोरीस्थित सुमेरु पर्वतमाथि रहेको नेपाल भारत सीमा पिलर ढालिएको छ ।
ठोरी गाउँपालिका वडा नं. २ ठोरी भन्सार नजिकै रहेको सुमेरु पर्वतमाथिको नेपाल भारत सीमामा गाडिएको ३६ नम्बर पिलर ढालेर ५ मिटर मुनि झारिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान श्रीरामको जन्मभूमि भारतको अयोध्यामा नभई पर्सा जिल्लाको पश्चिमी ठोरीस्थित रहेको भनेपछि सुमेरु पर्वतको बीच भागमा रहेको सीता गुफा अहिले चर्चामा आएको थियो ।
चट्टानै चट्टानयुक्त बनेको सुमेरु पर्वतको बीच भागमा रहेको सीता गुफाको माथिल्लो टुप्पामा रहेको नेपाल भारत सीमा ३६ नम्बर पिलर रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको स्वागत गर्दै स्थानीयवासी पूजाको तयारीमा
स्थलगत अनुगमनको क्रममा उक्त स्थानमा भगवान राम तथा सीतासँग जोडिएका शिवलिंग, कुण्ड, घडा लगायत विभिन्न प्राचीन सामानहरु सुरक्षित रहेको समाचारहरु बाहिर आएपछि शनिबार (आज) दिउँसोको समयमा पिलर एकाएक ढालिएको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
स्थानीयहरुको अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको स्वागत गर्दै ठोरीबासीले शनिबार धुमधामका साथ पूजाआजा गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा विहानसम्म पिलर त्यही स्थानमा रहेको तर साँझ हेर्दा पिलर ढालिसकिएको अवस्थामा पाइएको थियो ।
भारतीय पक्षले गुफा आफ्नो सीमानामा पार्न ढालेको आशंका
पूजाआजाको क्रममा सर्वसाधारणहरु सीता गुफाभन्दा मुनि झरेको मौका छोपेर पिलर ढालिएको स्थानीय रामसरण लामिछानेले बताए ।
उनीका अनुसार भारतीय पक्षले गुफालाई आफ्नो सीमामा पार्ने षडयन्त्र गर्नका लागि भारतीय एसएसबीको कुनै प्रतिनिधिले ढालेको हुन सक्ने बताए ।
सर्वसाधारण व्यक्तिलाई सीमासँग के मतलब छ ? र बेलाबखत रातारात एसएसबीले सीमामा रहेको पिलरलाई गायब गर्नुका साथै नेपालको भूमिभित्र ल्याएर राख्ने गरेको कुनै नौलो काम नरहेकोले यो पिलरलाई पनि उनीहरुले नै ढालेको हुन सक्ने बताए ।
शसस्त्र प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
घटना सार्वजनिक भएपछि तत्काल सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दीपक दाहाल तथा नेपाल प्रहरी निरीक्षक अशोककुमार साहसहितको टोली घटना स्थल पुगेको थियो ।
पिलर ढालिएको घटना सार्वजनिक भएपछि उक्त स्थानमा स्थानीयहरुको आवत जावतमा रोक लगाइएको छ भने भारतीय सीमा सुरक्षा बलका अधिकारी सहित सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको अधिकारीहरु पुगेर अनुसन्धान गरि रहेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दीपक दाहालले बताउनुभयो ।
उनका अनुसार सीता गुफामाथि रहेको ३५ नम्बर पिलर ढालेर ५ मिटर मुनि झरेको छ, तर कसले पिलर ढालेको हो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता नलागेको र अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रनि दाहालले बताउनुभयो ।
कोरोना भाइस को प्रभाव कम हुँदै !
No Comments on कोरोना भाइस को प्रभाव कम हुँदै !
कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको दैनिक पेश गरिने विवरणले देखाउन थालेको छ ।
संक्रमित थपिने भन्दा डिस्चार्ज हुनेहरुको संख्या नै दिनानु दिन बढदै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ५७ जना संक्रमित फेला पर्दा निको हुनेको संख्या १ सय ३ रहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरबाट १ सय ३ जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरुको कुल संख्या ११ हजार ६ सय ३७ पुगेको छ । निको हुनेको कुल संख्याको प्रतिशतमा यो ६६ दशमलव १२ प्रतिशत हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको ३ हजार ३ सय ३१ जनाको पीसीआर परीक्षणबाट ५७ जनामा मात्र कोरोना संक्रमण देखिए पनि जोखिम कम भइनसकेको तर्फ भने मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
लकडाउन खुले झै तवरबाट गतिविधिहरु हुन थालेकोप्रति सचेत हुन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले लापरवाही र हेलचेक्रयाई गर्न हुने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।
कोरोना भाइरस बाट बाच्नको लागि माक्स लगाउन अनिवार्य नभएको ट्र्म्प ले बताएका छ्न
No Comments on कोरोना भाइरस बाट बाच्नको लागि माक्स लगाउन अनिवार्य नभएको ट्र्म्प ले बताएका छ्न
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा मास्क लगाउनु अनिवार्य नभएको बताएका छन् ।कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रसारलाई ध्यानमा राख्दै धेरै देशहरूले मास्क लगाउन अनिवार्य गरेका छन, तर अमेरिकामा भने त्यस्तो आदेश जारी गरिएको छैन।
शुक्रवार ट्रम्पले फक्स न्यूजलाई भने, ‘म अमेरिकामा मास्क लगाउनु अनिवार्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छैन ।’ उनले भने, ‘मानिसहरुलाई केही स्वतन्त्रता हुनु पर्छ।’
उनका भनाइ यस्तो बेला आयो जब संक्रामक रोग विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य प्रमुख डा. फौचीले राजनीतिज्ञहरुलाई अपील गरे कि मानिसहरूलाई सकेसम्म मास्क लगाउन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले एक दम कम मास्क लगाएको देखिन्छन। यद्यपि उनले माकस लगाएको तस्वीर गत हप्ता सार्वजनिक भएको थियो ।
साहित्यकार प्रा.डा. विष्णु राज आत्रेय `लाटो साथी´ को निधन भएको छ !
No Comments on साहित्यकार प्रा.डा. विष्णु राज आत्रेय `लाटो साथी´ को निधन भएको छ !
काठमाडौँ — संस्कृत व्याकरणका विद्वान् एवं साहित्यकार प्रा.डा. विष्णुराज आत्रेय ‘लाटो साथी’को ७४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । वि.सं. २००३ साल पुस २५ गते कपिलवस्तुमा जन्मिएका साहित्यकार लाटो साथीको शनिबार आफ्नै निवास बत्तीसपुतलीमा निधन भएको हो ।
उनी क्यान्सर रोगबाट पीडित थिए । संस्कृत, नेपाली र अवधि भाषामा कलम चलाउने डा. आत्रेयका ‘हनुमदयन’ र ‘वैदेही’ महाकाव्य, ‘ढाक्रे’, ‘कपिलवस्तु’ लगायत खण्डकाव्य, ‘हामीभित्रका म’, ‘सोमतीर्थ’, ‘सुपा देउराली’, ‘कपिलधाम’, ‘शान्ताकुञ्ज’, ‘पाणिनी’, उपन्यासलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन् । संस्कृत भाषामा लेखिएको ‘हनुमदयन’ महाकाव्यका लागि उनले वि.सं. २०७५ को जयतु संस्कृतम् पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
‘कपिलधाम’ उपन्यासमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी एवं कपिलवस्तुको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका साथै ऋषि कपिलका विषयमा पनि उनले प्रकाश पारेको भूमिका लेखक उपप्राध्यापक ज्ञाननिष्ठ ज्ञवालीले बताए ।
भाषा, साहित्यका साथै धर्म, अध्यात्म, इतिहास, शिक्षालगायत क्षेत्रमा उनको रुचि थियो । घरपरिवारमा संस्कृतमै वार्तालाप गर्ने साहित्यकार आत्रेयले लामो समय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका थिए । उनले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभा सदस्यसमेत रहेर काम गरेका थिए । शनिबार नैपशुपति आर्यघाटमा वैदिक विधिअनुसार उनको अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ !
No Comments on कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ !
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । रु. ३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ रु. नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ तथा चालूतर्फ रु. सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालूतर्फ रु. १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगततर्फ ४२.८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५.४५ प्रतिशत तथा औसतमा ४७.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत अथार्त् रु. दुई अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार ६६५ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि रु. तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु. चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार विनियोजित बजेटमध्ये रु. दुई अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार ८१० खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु. एक अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार ४७१ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित रु. १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रु.४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार ७०८ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु. एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ खर्च गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले रु.१० करोड ७० लाख २१ हजार ८५२, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रु.९३ लाख ९७ हजार ७०६, प्रदेश योजना आयोगले रु. एक करोड ४३ लाख २२ हजार ९८२ बजेट खर्च गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहमार्फत दुई अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजार ८२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । – रासस
सुनसरीको घुस्कीमा तस्कर र सशस्त्र प्रहरीबीच झडप हुदा सशस्त्र प्रहरी घाइते
No Comments on सुनसरीको घुस्कीमा तस्कर र सशस्त्र प्रहरीबीच झडप हुदा सशस्त्र प्रहरी घाइते
इनरुवा, ०३ साउन । सुनसरीको घुस्कीमा तस्कर र सशस्त्र प्रहरीबीच शनिबार पनि झडप भएको छ । भारतीय सिमावर्ती हरिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा तस्कर समूहले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि झडप भएको हो ।
भारत तर्फबाट तस्करी गरी ल्याइएको सामान रोकेको विषयलाई लिएर तस्कर समूह डिउटीमा रहेका सुरक्षाकर्मी उपर जाई लागेको बताइएको छ । सशस्त्र प्रहरी ४ नम्बर गण सुनसरीका प्रमुख एसपी कृष्ण ढकालका अनुसार ८ देखि १० जनाको समूह सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङगामुडा गर्दै आएका थिए ।
तस्करहरुले प्रहार गरेको ढुङ्गामुडाबाट सशस्त्र प्रहरी जवान जिवराज विसुन्खे घाइते भएका छन् । उनको टाउको र ढाडमा गम्भिर चोट लागेको एसपी ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
रातिको समयमा ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि उक्त समूहलाई सम्झाएर हटाउन खोजेपनि अवस्था साम्य नहुँदा गोली चलाउउनु परेको उहाँले बताउनुभयो । ढकालका अनुसार तस्कर समूहले हतियारनै खोस्ने प्रयत्न गरिरहँदा लोड गरिएको बन्दुक पड्किएको हो ।
सो क्रममा हतियार खोस्ने प्रयन्तमा रहेका घुस्कीका २० वर्षीय संवाद अन्सारीको पेटमा गोली लागेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । उनको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ । घाइते सशस्त्र प्रहरीको पनि बीपीमा उपचार भइरहेको ४ नम्बर गण सुनसरीले जनाएको छ ।
बीओपीमै आएर आक्रमण गरिनुलाई सशस्त्र प्रहरी ४ नम्बर गण सुनसरीले गम्भिर रुपमा लिएको छ । उसले तस्कर र तस्करीका सामानलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले चाल्दै आएका कदम विरुद्ध बारम्बार अवरोध हुँदै आएको जनाएको छ । सुनसरीको दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा यसअघि समेत पटक पटक सशस्त्र र तस्करबीच झपड भैसकेको छ ।
जिब्रो चिप्लिने समस्या भएका नेपाली यी ५ सेलिब्रेटी हेर्नुहोस तस्बिर सहित्
No Comments on जिब्रो चिप्लिने समस्या भएका नेपाली यी ५ सेलिब्रेटी हेर्नुहोस तस्बिर सहित्
काठमाडौँ। नेपाली फिल्म क्षेत्रका धेरै जसो कलाकार अभिनयलाई लिएर भन्दा पनि बोलिलाई लिएर चर्चामा आउने गरेका छन् । कोही होस् नपुर्‍याएर बोल्दा विवा दमा तानिएका छन् भने कोही बढी बोलेर । कलाकारको बोल्ने तरीकालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल कलाकार महासंघले समेत सम्यमीत भएर आफ्नो कुरा खाख्न आग्रह गरेको छ । बोलिका कारण वि वादमा आएपछि कलाकारहरुले भने माफी माग्दै जिब्रो चिप्लिएको बताउने गरेका छन् ।
नेपाली सिनेमाकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका कार्किदेखि हाँस्यकलकारबाट नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेकी दिपाश्री निरौला समेत आफूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवा दमा परेका छन् । जिब्रो चिप्लिने विषयमा नायिकाबीच होडबाजी चलिरहँदा प्रियंका कार्किले हालसम्म भने सबैलाई पछाडि पारिरहेकी छन् ।
दिपाश्री निरौला-हास्य टेलीश्रींखला तीतो सत्यबाट चर्चामा आएकी दीपाश्री निरौला अहिले फिल्ममा समेत व्यस्त देखिन्छिन् । तर केही दिन अघि टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले दिएको एक अभिव्यक्तिले भने उनको चर्को आलो चना भएको छ । राजेश हमाल महानायक भएका छन्’ भन्ने प्रश्नमा दीपाश्रीले जवाफमा राजेश हमाललाई महानायक स्यंम पत्रकारले बनाइदिएको हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।
उनको आशय अनुसार राजेश हमाल महानायक नभएको बुझिएको थियो । यस अभिव्यक्तिपछि उनको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलो चना भइरहेको छ । आले चनापछि आफ्नो ग ल्ति स्वीकार्दै उनले माफी समेत मागेकी छन् । विवा दमा तानिएपछि दीपाश्रीको आग्रहमा टेलिभिजन च्यानलले युट्युबबाट उनको अन्तर्वार्ता हटाइदिएको छ ।
नेपाली फिल्मकी सबैभन्दा महंगी नायिकाको सूचीम पर्न सफल अभिनेत्री पूजा शर्मा हालै दिएको एक अन्तर्वार्ताका कारण चर्चामा आएकी छन् । उक्त टेलिभिजन कार्यक्रममा उनलाई नेपालमा कति वटा जिल्ला र प्रदेश छन् भनेर प्रश्न गरिएको थियो । जसमा उनले १४ जिल्ला र ७२ प्रदेश भनेकी थिइन् । आफ्नो देशको जिल्ला र प्रदेशबारे सामान्य ज्ञान पनि नराखेको भन्दै अहिले उनको सामाजिक संजालमा चौतर्फी आलो चना भइरहेको हो । मासिहरुले आफ्नो देशको बारेमा सामान्य ज्ञान जो सुकैलेपनि राख्न पर्ने भन्दै पूजालार्इृ गाली समेत गरेका छन् ।
अहिलेकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका कार्किले जिब्रो चिप्लिने विषयमा सबैलाई पछाडि पारेकी छन् । हरेक अन्तर्वार्ताहरुमा उत्साहित देखिने कार्किले एक अन्तर्वार्तामा आफू यूके, यूएस धेरै पटक गइसके तर अमेरिक भने पहिलो पटक आएको बताएकी थिइन् । सो भिडियो सार्वजनिक भए लगत्ते उनी समासजक सञ्जालमा हासोको पात्र बनेकी थिइन् । लगभग हरेक जसो अन्तर्वार्तामा कार्किको जिब्रो चिप्लिएको हुन्छ नै ।
यस्तै, अर्को अन्तर्वामामा पत्रकारले राजधानी कुन जिल्लामा पर्छ भनेर प्रश्न गर्दा कार्किले हाँस्दै काठमाडौ भनिन् । त्यसपछि काठमाडौ कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले बाग्मती भनिन् । छोटो समयमा दर्शकको मन जित्न सफल कार्किले अन्तर्वार्ताको समयमा जोशको साथमा होस गुमाएका देखिन्छ । कयौँ पटक जिब्रो चिप्लिएका कारण कार्कि सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको शिकार भएकी छन् ।
भारतले मिचेको नेपाली भूमी फिर्ताको विषयमा देशभर कुरा उठेको बेला विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली चलचित्रर्की लोकप्रिय नायिका वर्षा राउतले समेत चर्को आलो चना खेप्नु परेको थियो । एक युट्युव च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राउतले सीमाको विषय सरकारको रहेको र यसमा पत्रकारले नै झगडाको परिस्थिती खडा गरिदिएको बताएकी थिइन् ।
दुई देशका पत्रकार मिलेर झ गडा पारिरहेका कारण आफूलाई भारतीय साथीसँग सामना गर्न अप्य्यारो भएको राउतले बताएकी थिइन । उनको यस अभिव्यक्तिपछि चौतर्फि आ लोचना भएको थियो । जसका कारण वर्षाले आफूले भनेका कुरामा शब्द चयन राम्रो हुन नसकेकाले ग लत अर्थ लागेको भन्दै माफी मागेकी थिइन् ।
चर्चित गायिका आस्था राउत आस्था राउतले गएको माघमा चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलबाट भद्रपुरतर्फ उड्ने तयारीका क्रममा महिला प्रहरीले आफुलाई दु र्व्यवहार गरेको बताउदै राउतले प्रहरीलाई फेसबुक लाइभमा तथानाम गाली गरेकी थिइन् ।
विमानस्थलमा आफुलाई महिला प्रहरीले दुव्यवहार गरेको भन्दै राउतले प्रहरीलाई ‘डन्ठे’, ‘प्युसा’, ‘प्युपा’, ‘बन्दुके’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै रिस पोखेकी थिइन् । जसका कारण उनीविरु द्ध प क्राउ पूर्जि समेत जारीगरिएको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि राउतले फेसबुकबाट भिडियो डिलिट गर्दैै माफी मागेकी थिइन् ।
सुपादेउराली माताको दर्शन गरि फागुन ७ गते शुक्रबार को राशिफल हेर्नुहोस !
पाथीभरा माताको दर्शन गरि आज फागुन ५ गते बुधबार को राशिफल हेर्नुहोस !
प्रधानमन्त्री ओलीले आज सरकारका तीन वर्षे उपलब्धि सुनाउने
मनकामना मन्दिर को दर्शन गरि आज फागुन ३ गते सोमबार को राशिफल हेर्नुहोस !